Cornell nzira neLEbreOffice Munyori. Tora zvinyorwa zvine hungwaru | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi mishoma yapfuura takapindura maitiro ekushandisa nesoftware yemahara nzira inokakavara yekudzidza inonzi Photo-kuverenga. Iye zvino tava kuzozviita neimwe nzira inoremekedzeka zvishoma. Iyo Cornell Yekutora-Kutora Nzira.
Pakutanga nzira ye tCornell Notepad Iyo yakagadzirirwa manotsi kutora uchishandisa penzura uye bepa. Muchokwadi, kunyanya pre-yakadhindwa reams inotengeswa. Nekudaro, kubvira iyo yakawanda yegadziriro yemisimboti kupfuura fomati, inogona kuchinjika nyore nyore kudigital fomati.
Maitiro eCornell anopatsanura maitiro ekutora zvinyorwa muzvikamu zvitatu:
Dump pane rutsigiro (pekutanga bepa kana kwatiri pakombuta, nharembozha kana piritsi) ezvinyorwa nezve izvo zvatiri kuverenga kana kuteerera.
Kuumbwa mukunyora kwemibvunzo mhinduro dzayo zvidimbu zvemavara apfuura.
Kunyorwa kwepfupiso kweasina kupfuura matatu mitsara yezvirimo zvemanotsi.
1 Kugadzira pamusoro
2 Cornell nzira neLibreOffice. Aya ndiwo maitiro.
2.1 Kugadzira iyo stand yekutora zvinyorwa.
Kutanga kutora zvinyorwa tinofanirwa kupatsanura iyo 3-chikamu chebasa pamusoro. Izvi zvinoitwa nenzira inotevera.
Iyo yepasi 20% yeiyo jira yakachengeterwa pfupiso pfupi.
Iyo yepamusoro 80% yakakamurwa yakatwasuka ichisiya 30% kuruboshwe kwemibvunzo uye 70% yemamaki pachawo.
Sechinhu chetsika, iyo Cornell nzira inoshandisa bepa rakareba kupfuura iro rakafara. zvisinei, hapana chinokudzivirira kuti usashandise iyo yakatwasuka fomati inokodzera masikirini
Cornell nzira neLibreOffice. Aya ndiwo maitiro.
Zano rakapihwa nenyanzvi ndere kusaita zvavanotidzidzisa kuchikoro. Hapana chekunyora zvese zvataudzwa nemutauri kubva kuruboshwe kurudyi uye kubva kumusoro kusvika pasi. Kana iwe uri kutora zvinyorwa kubva mubhuku, usateedzere marongero akagadzwa nemunyori, asi pane iyo iyo inoita senge yakakodzera kwazvo kunzwisisa pfungwa. Kupatsanurwa kwemashoko uchishandisa manhamba kana imwewo mhedzisiro inoreva hutungamiriri yakaodzwa moyo.
Nzira yakanakisa kuronga zvinyorwa ndeizvi:
Mitongo: Nyora pasi nemashoko edu isu zvatiri kuverenga kana kuteerera. Kana isu tiri kuteerera, hatidi kunyora mazwi ese, zvakakwana kuti rugwaro rwunzwisisike nekufamba kwenguva.
Ndima: Pfungwa dzakabatana dzakarongedzwa nemusoro unoratidza kana tag.
Tsanangudzo: Izvo zvine zita remusoro uye tsananguro pfupi yezvinoreva.
Lists: Chinyorwa uye nhevedzano yemapfupiso mitsara imwe neimwe yakamonyorwa neasterisk.
Madhiagiramu: Mufananidzo wakajeka wemafungiro atinoda kunyora pasi.
Kana izvi zvaitwa tinogadzira mibvunzo ine mhinduro dzakasiyana dzemabhuru uye tinonyora pasi kuruboshwe rwejira. Kana tapedza chikamu ichi tinonyora pfupiso yechinyorwa pazasi.
Kugadzira iyo stand yekutora zvinyorwa.
Nzira iri nyore yekugadzira iyo Cornell chinyorwa pepa iri kushandisa LibreOffice Shoko. Maitiro acho anotevera:
Tiri kuenda Format➜Page maitiro.
Isu tinotarisa hupamhi uye kukwirira kweiyo peji. Ini ndinotora iwo mukana kuitira kuti iro peji iratidzwe yakatwasuka.
Isu tinogadzira tafura ne Tafura➜Pinza Tafura. Tafura yacho ichava nekoramu imwe uye mitsara miviri uye tinosarudza setaera yekusarudzika.
Iye zvino tinofanirwa kuita math. Iri jira rakakamurwa rakatwasuka kuita 80% kumusoro uye 20% pasi. Kwedu isu peji rinoyera 29,7 x 21 ine margin ye2 cm padivi rega. Izvi zvinotipa 20,56 cm yekoramu yepamusoro uye 5,14 cm yezasi. Isu tinoisa pointer pane yega yega mitsara uye nekona bhatani tinya paSize Row Kureba. Isu tinobvongodza iro rinochinja bhokisi uye toisa zviyero zvakasarudzwa. Iwe ungatofanira kudzikisa imwe yezviyero masendimita mashoma kuti tafura iri mukati peji.
Isu tinoisa pointer pamutsara wepamusoro uye nekomboni yekurudyi yatinosarudza Patsanura masero. Isu tinopatsanura sero mune 2 yakatwasuka.
Isu tinoisa pointer mukoramu kuruboshwe uye nekona bhatani isu tinosarudza Size Column upamhi. Isu tinosarudza 30% yehupamhi. Kwedu.
Isu tinosarudza iyo Yemafomu Bhokisi Fomu uye tinomaka imwe neimwe yenzvimbo neimwe yadzo.
Isu tinotumira kunze gwaro sePDF.
Iye zvino isu tinokwanisa kunyora zvinyorwa tichishandisa iyo pdf kuverenga kwekugovera kwedu. Saka iyo nkana iyo data yakapinda yakarasika, isu tinofanirwa kupurinda gwaro, asi, kusarudza faira sekuenda. Kana iwe uchida kuwedzera mifananidzo pIwe unogona kuvhura gwaro neLibreOffice Dhirowa uye wozoitumazve kunze se pdf.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Cornell nzira neLEbreOffice Munyori. Tora smart manotsi
OpenIndiana 2020.04 inosvika ne Python kugadzirisa uye nedzimwe shanduko